Home - The Word Foundation • Mpamoaka hevitra sy faniriana
Publishers amin'ny hevitra sy ny hevitra
Azonao atao ny mamolavola ny fampahalalana manan-danja ho anao amin'ny maha-olombelona anao-izay ao anaty boky Fisainana sy faniriana nataon'i Harold W. Percival, iray amin'ireo mpandinika lehibe indrindra tamin'ny taonjato 20. Ho an'ny fitopolo taona mahery, Fisainana sy faniriana dia iray amin'ireo fanambarana feno sy feno tanteraka amin'ny olombelona.
Ny tanjon'ity tranonkala ity dia ny fanaovana Ny fisainana sy ny faniriana, ary koa ireo bokin'Andriamatoa Percival hafa, azon'ny olona eran'izao tontolo izao. Ireo boky rehetra ireo dia azo vakiana an-tserasera ary azo jerena ao amin'ny tranombokintsika. Raha ity no fijerinao voalohany Ny fisainana sy ny faniriana, Azonao atao ny manomboka amin'ny fampidirana sy fampidirana an'ny mpanoratra.
Ireo mari-pamantarana jeometrika ampiasaina amin'ity tranokala ity dia mampita fitsipika metafizika izay aseho an-tsary sy nohazavaina ao Fisainana sy faniriana. Misy fampahalalana marobe momba ireo sariohatra ireo Eto.
Na dia nasehon'ny tantara tamintsika aza fa matetika ny olombelona dia mirona hanome voninahitra sy hanome voninahitra olona manana ny halehany HW Percival, dia izy ihany koa no nilaza fa tsy te hoheverina ho mpampianatra. Angatahany ny fanambarana ao amin'ny Fisainana sy faniriana hotsarain 'ny fahamarinana izay ao amin' ny olona tsirairay; Noho izany dia mamerina ny mpamaky amin'ny tenany izy:
Tsy maniry ny hitory amin'olona aho; Tsy mieritreritra ho mpitory teny na mpampianatra aho. Raha tsy tompon'andraikitra amin'ny boky aho, tiako ny tsy hiantso azy ho mpanoratra azy. Ny halehiben'ny lohahevitra izay atolotro fanazavana dia manafaka sy manafaka ahy amin'ny fiheveran-tena ary mandrara ny fitarainana amin'ny fahamaotinana. Manana fanambarana hafahafa sy mahavariana aho ho an'ny fahatsiarovan-tena sy tsy mety maty ao amin'ny vatana; ary maka antoka aho fa hanapa-kevitra amin'izay tiany na tsy hataony amin'ny fampahalalam-baovao.
About HW Percival
Heveriko manokana izany Fisainana sy faniriana ho ny boky manan-danja sy manan-danja izay navoaka tamin'ny fiteny rehetra.
Raha nosavaina tany amin'ny nosy aho ary navela haka boky iray, ity no boky.
Fisainana sy faniriana dia iray amin'ireo boky tsy misy dikany izay ho marina sy manan-kasina ho an'ny olona am-polony taona lasa, toy ny ankehitriny. Ny harenany ara-tsaina sy ara-panahy dia tsy mety ritra.
Tahaka ny ampahany amin'ny sokajin-taona rehetra i Shakespeare, izany koa Fisainana sy faniriana ny bokin'ny maha-olombelona.
Ny boky dia tsy amin'ny taona, na ny taonjato, fa ny vanim-potoana. Izy io dia manambara fototra fototry ny moraly ary mamaha olana ara-psikolojika izay nahagaga ny olona nandritra ny taona maro.
Fisainana sy faniriana dia manome ny fampahalalana izay efa nitadiavako ela. Boky tsy fahita firy, manintona sy manentana ny olombelona izany.
Amin'ny famakiana Fisainana sy faniriana Tena gaga aho, be taraina, ary tena liana. Boky iray! Inona ny eritreritra vaovao (amiko) misy!
Tsy mbola nisy talohan'izao, ary mpikaroka mavitrika amin'ny fahamarinana aho nandritra ny androm-piainako rehetra, nahita fahendrena sy fahazavana betsaka aho raha mbola hitako foana Fisainana sy faniriana.
Hatramin'ny nahitako ity boky ity dia toa tsy tonga ho an'ity izao tontolo izao feno fientanentanana ity aho, dia nanitsy ahy haingana be.
Isaky ny mahatsiaro tena ho kivy aho dia manokatra ilay boky amin'ny fomba mahazatra ary mahita marina ny zavatra vakiana izay manome ahy ny fiakarana sy ny tanjaka ilainao amin'ny fotoana. Marina fa mamorona ny anjarantsika isika amin'ny alalan'ny fisainana. Mety ho hafa ny fiainana raha toa ka nampianarina isika fa avy am-pilaminana.
Percival ny Fisainana sy faniriana dia tokony hampitsahatra ny fikarohana marina ataon'ny mpikaroka matotra momba ny fiainana. Nasehon'ny mpanoratra fa fantany izay lazainy. Tsy misy fiteny ara-pivavahana manjavozavo ary tsy misy tombantombana. Tsy manam-paharoa amin'ity karazana ity i Percival dia nanoratra izay fantany ary mahafantatra zavatra betsaka izy - azo antoka fa mihoatra noho ny mpanoratra fantatra rehetra. Raha manontany tena ianao hoe iza ianao, maninona no eto ianao, ny toetran'izao rehetra izao na ny dikan'ny fiainana dia tsy hamela anao ho faty i Percival ... Miomàna!
Io no iray amin'ireo boky manan-danja indrindra izay nosoratana tamin'ny tantara malaza sy tsy fantatra teto amin'ity planeta ity. Ny hevitra sy ny fahalalana dia manintona ny misaina, ary manana ny "peratra" ny fahamarinana. HW Percival dia mpanasoa iray tsy fanta-daza amin'ny olombelona, ​​araka ny asehon'ireo fanomezam-pahasoavan'ny literatiora, raha toa tsy voavaha ny fanadihadiana. Mahagaga ahy ny tsy fisian'ny asa fametrahana azy ao anatin'ireo lisitra "feno vakiteny" maro amin'ny faran'ny bokim-pahaizana sarobidy maro izay novakiako. Izy no iray amin'ireo sekretera tsara indrindra ao amin'ny tontolon'ny fisainan'ny lehilahy. Ny tsikitsiky mahafinaritra sy ny fahatsapana fankasitrahana dia voambara ao anatin'izany, isaky ny mieritreritra an'io toetra voatahy io aho, fantatry ny olona tahaka an'i Harold Waldwin Percival.
Taorian'ny 30 taona nanaovana fanamarihana maro avy amin'ny boky maro momba ny psikology, ny filôzôfia, ny siansa, ny metaphysika, ny teôlôjia ary ireo olom-pianakaviana havana, ity boky mahatalanjona ity dia valiny feno amin'izay rehetra nitadiavako nandritra ny taona maro. Rehefa mandray ny votoaty aho dia miteraka fahalalahana ara-tsaina, ara-pihetseham-po ary ara-batana miaraka amin'ny fitaomam-panahy nasandratra izay tsy afaka maneho ny teny. Heveriko fa ity boky ity no mampihetsi-po indrindra ary manambara fa mbola nahafinaritra ahy ny namaky.
Ny boky tsara indrindra novakiako; tena lalina ary manazava ny zava-drehetra momba ny fisiana iray. Buddha dia nilaza fa taloha dia io no renin'ny hetsika rehetra. Tsy misy tsara noho ity boky ity hanazava amin'ny antsipiriany. Misaotra anao.